Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Madal cusub oo aqoon bulsheed ah oo uu bilaabay Diem
Diem, oo ah bedel cusub oo warbaahinta bulshada ah, ayaa bilaabaya inay u abuurto goobo bulsheed dijital ah haweenka & dadka aan ikhtiyaariga ahayn si ay ugu xirmaan dhibcaha guud, iyagoo ka hadlaya waaya-aragnimada xun ee ay sida caadiga ah kala kulmaan shabakadaha bulshada ee xilka haya. Tiknoolajiyadda Diem waxay xarumo u tahay isku xirka bulshada iyo wadaagga aqoonta dhabta ah, oo ka fogaanaya kuwa la soo abaabulay, waxqabad waxqabad leh oo aan shuruud ku xirayno inaan ku lug yeelano warbaahinta bulshada iyo jihada sinnaan, khibrad shaqsiyeed halkaas oo aqoontu ay tahay qaabka ugu dambeeya ee lacagta bulshada.
Diem wuxuu ku jiray beta ilaa Janaayo 2021 wuxuuna uruuriyay liis sugitaan oo ka badan 20,000 oo qof. Kahor duubitaankeeda dadweynaha, Diem wuxuu si taxaddar leh u dajiyay in ka badan 100+ "Aasaasayaasha Aasaasayaasha" si ay ula wadaagaan waaya-aragnimadooda iyo aragtiyo u qalma bulshooyinka ku habboon, xiisaha-ku-dhex-jira ee madasha iyada oo loo marayo qaabab isku-habboon & isku-habboon. Dadka ku nool Diem waxay awoodi doonaan inay ogaadaan Marti -geliyayaal ka soo jeeda asal kala duwan sida la -taliyayaal maaliyadeed, ganacsato iyo OBGYNs. Marti -qaadayaasha ayaa sidoo kale ku jira koox ka kooban hal -abuurayaal hormuud ah, ganacsato iyo hoggaamiyeyaal fikirka warshadaha oo ay ku jiraan Kirsty Godso, Sabia Wade, Lauren Maillian, iyo Jaclyn Johnson, kuwaas oo dhammaantood ku biiraya Guddiga La -talinta shirkadda si ay u qaabeeyaan madal bulsheed kale oo mustaqbalka ah oo ay rabaan inay ku lug yeeshaan . Johnson wuxuu wadaagayaa, "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan martigeliyo oo aan maalgashado Diem, anigoo dhisay ganacsi ku saleysan haweenka waxaan fahamsanahay baahida loo qabo bulshooyinka dalwaddu u leeyihiin dadka inay isku xirmaan midba midka kale iyo khubaro meel loogu talagalay."
Mid ka mid ah mabaadi'da asaasiga ah ee Diem waa inaan la dhisin teknolojiyad aan loo baahnayn oo qabatin leh, maxaa yeelay mustaqbalka warbaahinta bulshada ma aha in la urursado kubbadaha indhaha iyada oo loo marayo wadaagga waxqabad. Waxay ku saabsan tahay abuurista aalado leh qaab dakhli oo sidoo kale ka faa'iideysta dadka wax ku biirinaya. Mustaqbalka, Diem wuxuu qorsheynayaa inuu ku curiyo tiknoolajiyadda qadiimiga ah, laba-cabbir ee shabakadaha bulshada iyo teknolojiyadda suunka sida caadiga ah laga helo ciyaaraha iyo AR/VR si loo beero bulshooyinka dhabta ah, saddexda-cabbir.
Maitree Mervana Parekh, Maal -galiyaha Acrew, ayaa sharxaya, “Bulshadu waxay wadataa lahaanshaha aadanaha, teknolojiyaduna waxay muujisay awoodda ay u leedahay inay noqoto il awood leh oo kobcisa tan. Si kastaba ha noqotee, teknolojiyadda mudnaanta siineysa isku -darka iyo wax -ku -oolnimada ma ahayn safka hore. Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay Diem. Waxay riixaysaa xadka “shabakad bulsho” oo si dhab ah u qaabaynaysa waayo -aragnimo bulsheed oo dhex -dhexaad ah oo u saamaxaysa xubnaheeda inay isku xidhmaan, is -dhaafsadaan aqoonta, oo ay ku koraan si ula kac ah oo loo dhan yahay. ”
Waxaan wada ognahay in baraha bulshada ay saameyn weyn ku leedahay sida aan u nool nahay, u shaqeyno oo aan u wada xiriirno, haddana, aaladaha ugu sarreeya maanta dhammaantood waxaa naqshadeeyay rag. Taasi waxay badanaa la micno tahay in shirkadaha warbaahinta bulshada ay u hoggaansamaan siyaasadaha waxyeellada leh iyo kuwa jinsiga ah, taas oo ka dhigaysa meel ka yar haweenka iyo dadka aan ikhtiyaarka lahayn inay ku noolaadaan adduunyada dalwaddii. Khabiirka bulshada, Abadesi Osunsade, wuxuu leeyahay, “Dumar ahaan, aaladaha warbaahinta bulshada ee ugu badan waxay bilaabeen inay dareemaan dhiig -miirasho, iyagoo nagu dhiirrigelinaya inaan u nuglaano goobaha dadweynaha si aan uga qaybgalno. Diem wuxuu ku saabsan yahay bulshada iyo xiriir aan lahayn ajande qarsoon. ”
Diem wuxuu u soo baxayaa dadweynaha inta lagu jiro Oktoobar 2021. Kooxda fadhigeedu yahay New York waa Techstars NYC '20 portfolio company, oo ay taageereen $ 900,000 oo ah maalgelinta abuurka ka hor oo ay ka qaybqaadanayso Xfactor Ventures, Acrew iyo malaa'igta hormuudka ah sida Abuuraha & kobciye aasaasaha , Jaclyn Johnson iyo Discord Executive, Amber Atherton.